Muqdisho:Maxkamadda Ciidamada Qalabka sida oo maanta Askar ku fulisay Xukun dil ah –SAWIRRO | LAASKA NEWS AND ANALYSIS
Home > Muqdisho, TFG Somalia, WARARKA	> Muqdisho:Maxkamadda Ciidamada Qalabka sida oo maanta Askar ku fulisay Xukun dil ah –SAWIRRO
Muqdisho:Maxkamadda Ciidamada Qalabka sida oo maanta Askar ku fulisay Xukun dil ah –SAWIRRO
Laaska News 15,2011.
FG:Ka ilaali Caruurta Suuradaha
Maxkamadad Ciidamada qalabka sida ee Dowladad Federaalka KMG-ka Soomaaliya ayaa maanta si rasmi ah Xukun dil ah ugu fulisay sadex Gacan ku dhiigle kuwaa oo horay ay Maxkamaddu ugu Xukuntay dil Toogasho ah.
Subaxnimadii maanta ayaa waxaa Barxadda weyn ee ka soo horjeedda Dugsiga tabobarka Ciidamada Booliska ee Generaal kaahiye lagu toogtay sadex nin oo gacan ku dhiigleyaal ah kuwaas oo si bareer ah xilliyo kala duwan gacantooda ugu dilay sadex Muwaadin oo Soomaali ah.
Daawashada dilka sadexdaasi ruux ayaa waxaa gobjoog ka ahaa mas’uuliyiin ka tirsan Maamulka gobolka Banaadir oo uu ka mid ahaa xoghayaha Guud ee maamgulka gobolka C/kaafi Hilowle Cusmaan, Guddoomiyaha Maxkamadad Ciidamaad qalabka sida Xasan Muungaab, Taliyaha qeybta Guud ee Ciidamada Booliska Gobolka Banaadir Generaal Axmed Xasan Maalin iyo dadweyne aad u faro badan oo ka kala yimid qaar ka mid ah degmooyinka Gobolkani Banaadir.
Sadexda gacan ku dhiigle ee ay Maxkamaddu dilka ku fulisay ayaa waaxaa lagu kala magacaabi jiray
1.C/casiis Maxamuud Gacal oo ahaa Dable ka tirsan Ciidamada booliska kaas oo 2/06/2010-ka si bareer ah u dilay Muwaadin lagu magacaabi jiray Salaad Maxamuud Cabdi , waxaana ay Maxkamaddu xukun dil ah ku xukuntay 14/12/10-ka.
2.Cantoob Carabow Cadaan oo 5/06/2009-kii si gardarro ah u dilay Xasan Maxamuud jibriil,iyadoo Maxakamaddu ay xukuntay 18/12/2009-kii.
3.Mowliid Maxamed Xasan oo aha Dable ka tirsan ciidamada booliska waxa uu 11/05/10 si barer ah u toogtay Muwaadin lagu magacaabI Jiray Aaden Saalax jaamac waxa ayna Maxkamaddu xukuntay 14/12/10-kii.
Guddoomiyaha Maxkamadda Ciidamada qalabka sida Xasan Muungaab oo saxafada kula hadalay goobta ay toogashadu ka dhacday aya tilmaamay inaan cidna lagu gardarooneynin islamarkaasna aan cidna loo ogolaan doonin in iyadoo dishay ruux kale ay si nabad ah ugu dhex noolaato qeybaha kale ee bulshada, waxa uuna ugu baaqay Ciidamada qalabka sida inay hubka ka jeediyaan shacbiga taas bedelkeedana ay ku jeediyaan cadowga Alshabab iyo Ajaaniibta dambiileyaasha ah ee ku soo duulay gudaha dalka.
Ma ahan markii ugu horreysay oo ay Maxkamadda Ciidamaada qalabka sida Xukun dil ah ku fuliso askar ka tirsan ciidamaad Dowladad oo si barer ah u dilay muwaadiniin kale, dhowaan ayeey aheyd markii ay Maxkamddu ruux da’ ah kana tirsaanaa ciidamaad ay sidaan oo kale xukun dil ah ugu fulisay taas oo rajo weyn ku abuurtay bulshada.
Photo By Abdi kadar Atosh.
Tags: court, dil, Government, Maxkamada Ciidan, Mogadishu, Muqdisho, Toogasho
R/wasaaraha oo la kulmay Madax ka tirsan Caalamka- SAWIRRO Madaxweyne Siilaanyo oo Golihiisa Wasiirada qaar kamid ah ku sameeyay Isbadal,Xil ka qaadis iyo Xaabsade oo loo magacaabay Wasaarada Wafaafinta